Mogadishu Journal » Dowladda Hoose oo olole Nadaafadeed ka bilowday Suuqa Caanaha ee Xuddur +Sawirro
Maamulka dowladda hoose ee degmada Xuddur, ayaa maanta olole nadaafadeed ka sameeyay suuqa caanaha lagu iibiyo ee magaalada, halkaas oo ay ka jirtay nadaafad xumo aad u daran, sid ay sheegeen saraakiisha degmada.
Xoghayaha dowladda hoose, C/fitaax Maxamed Boorow, ayaa sheegay in shaqada suuqa la joojiyay labo maalin taas oo loogu gol leeyahay in nadaafadda suuqa la hagaajiyo, maadaam ganacsatada suuqa ay shaqada u joojiyeen nadaafad darada halkaas ka jirta awgeed.
Ka sokow suuqa caanaha, waxaa kale oo ololaha nadaafadda laga sameyay qeybta dharka lagu tolo kuwaas oo shaqada u joojiyay ololaha halkaas ka socda.
Guddoomiyaha xafiiska Maaliyadda degmada Xuddur Aadan Cabdi Abaarey ayaa ganacsatada ku war geliyay in suuqa labo maalin xirnaan doono inta ololaha nadaafadeed uu ka soo idlaanayo.
Suuqa caanaha ee degmada Xuddur waxaa uu kamid yahay meelaha ugu mashquulka badan maalin kasta waxaa halkaas yimaada boqolaal shacab ah oo isugu jira kuwa caanaha keena iyo dadka iibsada.